Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka oo la kulmay Wasiirka Arrimaha dibadda ee Denmark “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka oo la kulmay Wasiirka Arrimaha dibadda ee Denmark “SAWIRRO”
in Keyd Hore, Wararka, Xulashada
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa kulan la qaatay Wasiirka Arrimaha dibadda ee Denmark Mr Kristian Jensen oo ay ka wada hadleen xaaladda dalka.
Shirka waxa looga hadlay arrimaha siyaasadda, horumarka, doorashada, amniga iyo arrimo kale oo ay ugu horeyso xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladda Denmark uga qeyb qaadan lahayeen mashaariicda lagu horumarinayo Soomaaliya.
Madaxweynaha JFS oo sidiiran loogu soodhaweeyay dalka Turkiga “SAWIRRO”
Mudane Maxamed Cumar Carte Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa Wasiirka uga warbixiyay xaaladda guud ee Soomaaliya iyo sida Denmark ay uga qeyb qaadan karto horumarka ka jirta dalka.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Denmark Mr Kristian Jensen ayaa sheegay in Soomaaliya ay xilligan ku talaabsatay horumar ayna diyaar u yihiin inay xoojiyaan taageerada ay siinayaan dowladda Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa uga mahadceliyay Wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark doorka ay ku leeyihiin horumarka Soomaaliya.
“Soomaaliya xilligan waxa ay diyaar u tahay in xilligan ay dalka ka hirgeliso doorasho dadban, waxaana dowladda ay horumar ka sameysay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha, beni’aadanimada, amniga iyo siyaasadda”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka oo la kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Denmark
Madaxweynaha oo la kulmay Suxufiyiinta Soomaaliyeed